Gịnị kpatara Valeria Copponi? - Ngụda na Alaeze ahụ
Akụkọ Valeria's Copponi banyere inweta ebe sitere na eluigwe bidoro mgbe ọ nọ na Lourdes soro di ya bụ agha na njem uka. N’ebe ahụ, ọ nụrụ olu ọ matara dị ka mmụọ ozi na-eche ya nche, na-agwa ya ka o bilie. Mgbe ahụ o nyefere ya Nwanyị anyị, onye sịrị, “will ga-abụ onye e mechitere m” - okwu ọ ghọtara mgbe ọtụtụ afọ gachara mgbe ụkọchukwu jiri ya mee ihe gbasara otu ekpere o bidoro n'obodo Rome, Italy. Nzukọ ndị a, nke Valeria nyefere ozi ya, bụ nke mbụ a na-eme ugboro abụọ kwa ụbọchị na Wednesde, mgbe ahụ kwa izu na arịrịọ Jizọs, onye ọ na-ekwu na ọ hụrụ n'ụlọ ụka Sant'Ignazio n'ihe metụtara nzukọ na onye Jesuit America, Fr. Robert Faricy. Nkwado oku nke Valeria enwetara site n’ọtụtụ ọgwụgwọ dị iche iche karịrị mmadụ, gụnyere otu site n’ọtụtụ sclerosis, nke sokwa na mmiri ọrụ ebube na Collevalenza, ‘Italian Lourdes’ na ụlọ onye nọn Spen, Mama Speranza di Gesù (1893-1983), ugbu a ịkụ aka.
Ozi si Valeria Copponi
N'oge na-adịghị anya ihe niile ga-emezu...
okwukwe, magisterium, mmezi, -ata ahụhụ, eziokwu
Valeria - Oge na-agbanye
Enweghị m ike ịhapụ gị. Ikwesiri inyere m aka.
akakabarede, nchegharị, obere, oge
Valeria - Kedu ihe ọzọ m nwere ike imere gị?
Tetanụ, oge adịrịkwaghị ihi ụra!
mgbe ebighị ebi, igwe, hell, ụgwọ ọrụ, ule, Mkpagbu
Valeria - Atụla egwu ihe ọjọọ
Jizọs ji ụzọ niile rute ndị ikpeazụ n’ime ụmụ Ya.
anwụrụ, amara, -adịghị mma, enweghi ike, agwọ
Valeria - Ị na-ebi n'oge ikpeazụ
Enweghị m ike ichere ka m jide unu niile n'otu nku.
njedebe oge, Oge nke Udo, nchedo, ebe mgbaba, Ịdọ aka ná ntị
Valeria - Gbaa akaebe maka Oziọma Nsọ
Ọ bụ ezi Okwu Chineke.
Bible, Canon, ụka, Oziọma, john, luke, akara, Matiu, Akwụkwọ Nsọ, okwu chukwu
Valeria - N'oge ikpeazụ a
...M ga-abịarukwa gị nso.
na-ebu ọnụ, ekpere, mgbapụta, uwa, -ata ahụhụ
Valeria - Bụrụ ụmụ ikpeazụ nke udo
Ndị niile nọ gị nso kwesịrị ịhụ ike gị sitere na Chineke.
ụwa, Oge nke Udo, Mmụọ nsọ, udo, mmetọ, ekpere, ike
Valeria - a na-eme ngwa ngwa
N’oge na-adịghị anya, ị ga-enwere onwe gị pụọ n’agbụ Setan.
Achịcha nke Ndụ, Oge nke Udo, Oriri Nsọ, Jesus, uka, Ọbara dị oke ọnụ ahịa, nloghachi, Mmeri
Valeria - Bụrụ Ndịozi Udo M
Gbaghara ndị na-emerụ gị ahụ... kpee ekpere & buo ọnụ.
nkwupụta, Oriri Nsọ, na-ebu ọnụ, n'anya, udo, ekpere, mmezi, uwa
Valeria - Abụ m nne gị
Ekwela ka obi abụọ ghara ịhụ ịhụnanya nke jikọrọ gị na m.
nri kwa ụbọchị, Oriri Nsọ, okwukwe, egwu, Obi Obi Anyi, Jesus, Mary, nne, tụkwasị obi
Valeria - Were mkpebi siri ike n'ebe Chineke nọ
Naanị na nrubeisi, ị nwere ike ịzọpụta ndụ.
nnwere onwe, dị umeala n'obi, ịdị umeala n'obi, n'anya, nrubeisi, ndidi, ekpere, uwa, mmeri
Valeria - Gini mere egwu ji ewere obi gi?
Ekwensu maara na oge a bụ oge ikpeazụ.
Ekwensu, Oge nke Udo, Oriri Nsọ, nnwere onwe, ikpe ziri ezi, ụwa ọhụrụ, Mmeri, tụkwasị obi
Valeria - Ị kwenyere na ọdịdị m?
Naanị ọnụ ọgụgụ dị nta n'ime unu egewo m ntị.
anya, nkwupụta, ekweghiekwe, obi abụọ, Oriri Nsọ, ntachi obi, fọdụrụnụ, obere ìgwè atụrụ, ọnwụnwa, oge
Valeria - Na-erube isi n'iwu Chineke
... na hubris nke mmadụ.
ịdị umeala n'obi, nganga, sayensị, sayensị
Valeria - n'oge adịghị anya oge ndị a ga -akwụsị
Ekwela ka nnwere onwe gị mebie.
ebighi, mgbe ebighị ebi, ikwesị ntụkwasị obi, nnwere onwe, igwe, hell, ndụ, ekpere, akaebe
Valeria - Ahụtụbeghị m ọtụtụ anya mmiri
... mana oge gị ga -ahụ njedebe nke ihe ọjọọ.
Akara ngosi, Obi Obi Anyi, anya mmiri, na-akwa ákwá
Valeria - Mee ụzọ maka ọ joyụ
Ihe ọjọọ agaghị adị ọzọ.
onye katoliki, ụka, Oge nke Udo, okwukwe, Mary, ekpere, Mmeri
Valeria - A na m agwa gị ọzọ ka ịdị ọcha
Ahụ gị kwesịrị ịdị ndụ na ịdị ọcha. . .
onye katoliki, okwukwe, Mary, nne, ọcha
Valeria - Oge ikpeazụ nke anyị
Ọgụ ikpeazụ nke oge a megide Setan.
nduzi Chineke, Obi Obi Anyi, iwu, Mary, mmefu, ebe mgbaba, ọnwụnwa, Mmeri, mmeri
Valeria - Oriri Nsọ, nchekwa gị
Ya adịkwala mgbe ị ga -esi na Chọọchị Kraịst pụọ.
Calvary, onye katoliki, ụka, agafe, Oriri Nsọ, ikwesị ntụkwasị obi, ntọala, Jesus, uka, uwa, nzọpụta
Valeria - oku nye ndi nne
Kpee ekpere ma chụọ aja maka mkpụrụ obi.
na-ebu ọnụ, arịrịọ, nne, nne, ekpere, nchụàjà, -nchu-àjà, uwa, iru-újú, ewe iwe
Valeria - Na Ibute Ihe Ime Mmụọ Firstzọ
... kama busyness na ụwa ihe.
nkwupụta, nkwụsị, ihe ụwa, igwe, Jesus, ike, sacrament, satan, ime mmụọ, ọnọdụ ime mmụọ, ụwa
Valeria - Nkwanye forgwù Maka Chọọchị M
A pụghị ịghọtahie ihe bụ eziokwu na ihe bụ nanị ụgha.
onye ozi, onye katoliki, ụka, okwukwe, nsọ, otu, Rom, eziokwu, ịdị n'otu
Valeria - Hapụ Mmehie Behind
... ma ọ bụ na ị gaghị amata ezi ịhụnanya.
Valeria - Deswa Kwesịrị Ahụhụ
... ma anyị na-ebibi onwe anyị!
ahuhu, ọcha, Jesus, ntaramahụhụ, ọcha, ọcha, Mkpagbu, mmeri, ụwa, eto eto
Valeria - Nzukọ nke Mpako
Ntughari bụ ihe fọdụrụ.
mpako, Bebel, ihe ọmụma, sayensị, sayensị, nzuko
Valeria - Apụghị m ịhapụ ụmụ m
Oge ndị a enweghị ike ịga n'ihu ...
onye katoliki, mgbagwoju anya, akakabarede, okwukwe, Mary, nne
Valeria - Ikpe ekpere na ọnwụnwa
Agaghi anwa gi karia ike gi.
Oriri Nsọ, Jesus, nna anyi, kpee ekpere, ekpere, satan, ike, ọnwụnwa
Valeria - inessdị Nsọ Pụtara Nzọpụta!
Ndụmọdụ bara uru si n’aka nne nwanyị anyị.
ndu ebighi-ebi, mgbe ebighị ebi, ngwa ngwa, ịdị nsọ, enweghi ike, kpee ekpere, nzọpụta
Valeria - Burnhụnanya Maka Jizọs
M na-eru uju, ma n'oge na-adịghị mmeri.
cenacle, Obi Obi Anyi, Jesus, ekpere, Mmeri
Valeria - Makụọ ibe gị
Youghọtala ihe i belatara?
ịmakụ, Oriri Nsọ, egwu, obi ụtọ, amakụ, Jesus, ọṅụ, n'anya, udo
Valeria - Ekpere Kacha Obi Prayertọ
Àjà nke Mass Dị Nsọ.
ọbara, aru, kwa, Oriri Nsọ, ịgba akwụkwọ, uka, ekpere, sacrament, uwa
Valeria - Na Mgbaghara
Nye ndụ gị n'ihi Jesus.
mgbaghara, n'anya, ebere
Valeria - Dika umuaka ozo
Ami nyeno fi idara emi okokohode ...
ịgbahapụ, dị ka nwata, ụmụ, okwukwe, Jesus, alaeze, ikwenye, tụkwasị obi
Valeria - I Nwere M
Are nọ n’udo.
ido-nsọ, egwu, enweghị nchebe, Mary, nkà mmụta ọgwụ, nne, ekpere, tụkwasị obi
Valeria - atụfula ọchị gị
Onye ọ bụla kwere na Chineke ekwesịghị ịkwụsị inwe olileanya.
Oge nke Udo, Jesus, Mary, Mmeri
Valeria - Obere oge dị obere
Naanị mụ na gị nọ na nchekwa.
agha, ụka, Ekwensu, Oriri Nsọ, hell, Jesus, Mary, nne, ahuhu, nchedo, ebe mgbaba, satan
Valeria - Ahụhụ M Anwụbeghị
Dochọpụtaghị ihe egwu dị na ya ...
Covidien-19, agafe, hell, ọrịa, mmezi, nzọpụta, -ata ahụhụ
Valeria - Tinye Chọọchị Katọlik M
Enwere otu Okwukwe.
onye ozi, onye katoliki, oche, ụka, okwukwe, Jesus, Pita, rock, Rom, Rome
Valeria - Emela Obi abụọ na Ọnụnọ m
N'oge na-adịghị anya, ihe ọjọọ ga-agwụ.
ndị mmụọ ozi, Mary, nne, Nwanyi anyi, nne na nna, Ọbịbịa nke Abụọ
Valeria - Iomie Ezinụlọ Dị Nsọ
Ndị dị ike wakporo anyị.
atụ, ezinụlọ, dike, ude, Jesus, Joseph, Mary, model, nazaret, Mkpagbu, ekpere
Valeria - Mee Ndozi maka Mmejọ Ndị A
Na nzaghachi, ị ga-enwe mgbanwe n'etiti ndị ị hụrụ n'anya.
akakabarede, nkọcha, Jesus, Mary, mmejọ, mmezi, nchegharị
Valeria - Nyere m aka
Uche unu abaghịzi uru na Ìhè ahụ.
nkwupụta, Mary, nne, nrubeisi, ekpere, mmezi, sacrament
Valeria - Oge Na-eru Nso
Jikere onwe unu.
Iwu, Mkpagbu, ịdị ngwa na-
Valeria - Agwọ Oge Ochie Na-eji Falgha
Na ọnwụnwa gbanwee ozugbo na ekpere
Valeria - Zụlite tomụaka Ka Ha Hụ Jizọs n'Anya
ụmụ, ezinụlọ, ndị nna, Jesus, Mary, nne, ekpere, afọ iri na ụma
Valeria - Nyefee Onwe M n'aka m
Atụkwasịla ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ ndị ọnụ ọgụgụ ha dị ala obi.
nduzi, igwe, Obi Obi Anyi, Mary, onodu, nne, nchedo, ebe mgbaba
Valeria - Abụ m Onye ahụ!
Nne gị ga-eduga gị na nzọpụta.
okwukwe, olileanya, Jesus, eze, Mary, nne, queen, nzọpụta, onye nzọpụta, amaghị nwoke
Valeria - Achọrọ M Ka be Na-enwe Ọyụ
Mụmụọ ọnụ ọchị, n'ihi nzọpụta gị.
Oge nke Udo, okwukwe, olileanya, Jesus, ọṅụ, Mary, na-aṅụrị ọṅụ, ọchị, Mmeri, tụkwasị obi, mmeri
Valeria - K Maara Oge A Na-abịa
Nwee obi iru ala, kpee ekpere ma too Chukwu.
Na-emegide Kraịst, apocalypse, njedebe oge, Oge nke Udo, Mkpagbu, ekpere, echiche, Rosary, Mkpagbu, Mmeri, mmeri
Valeria - Tupu Ogologo…
... ị ga-enweta ọ joyụ kachasị ukwuu.
nsogbu, Oge nke Udo, Jesus, nne, Pentikọst, ọchịchị, ule, Mkpagbu, Mmeri, mmeri
Valeria - Ekpere na Ahụhụ
Ihe nke ụwa agakwaghị ezuru gị.
Oge nke Udo, okwukwe, ọṅụ, ndidi, ekpere, -ata ahụhụ, Mkpagbu, Mmeri
Valeria - Trusttụkwasị Okwu Chineke obi
Mee ka omumu m buru omumu gi.
amụ nwa, Krismas, akakabarede, ime mgbu, nrubeisi, ekpere, nchegharị, Mmeri
Valeria - Ana m ata ahụhụ nke ukwuu
Ikpe ziri ezi na-aga n'ihu na nnukwu ọganihu.
agafe, kpogidere n'obe, mgbaghara, hell, Jesus, nchegharị, uwa
... ugbua na enwerela nnwere onwe gị.
tọghata, Covidien-19, ngwa ngwa, nnwere onwe, kpee ekpere, chegharịa, oge, ule, Mkpagbu, ngwa ngwa
Valeria - A nwalere gị nke ukwuu
Adim njikere ichebe gi.
Enyemaka, Jesus, Mary, aha, n'echebe, ebe mgbaba, amaghị nwoke
Valeria - Jesus Ga-alaghachi n'isi Nso
Ma nke mbụ, ọnwụnwa ga-apụta na mberede ...
abịa, Oge nke Udo, Jesus, Mary, ebe mgbaba, nloghachi, Mmeri
Valeria - Nyefee Na-enweghị Mgbanwe
Ọchịchịrị adịghị agbanwe ụzọ Chineke.
ịgbahapụ, atula egwu, ikwenye, tụkwasị obi
Valeria - Ahụhụ Na-enyere Aka lecttụgharị uche
Kpebie ime ihe ọma ma merie.
Mmata, oke, họrọ, nnupu isi, ikwesị ntụkwasị obi, ebere, echiche, -ata ahụhụ, ọnwụnwa
Valeria - Oge Abịala
Onweghi onye ga-enwe ike isi: "Amaghị m".
nkwupụta, Jesus, nchegharị, mmehie, Ịdọ aka ná ntị
Valeria - Ọ Dịbeghị mgbe M Dị Nso
Nyefere m onwe m.
Obi Obi Anyi, Mary, nne, udo, ekpere, ule
Valeria - Ekpere Na-ewusa Umu M
Jiri obi gị gụgharịa “Okwukwe”.
credo, nkwenye, okwukwe, ekpere, Mmeri
Valeria - Lelee Anya
Onweghi onye puru inara gi ndu ebighi ebi.
mgbe ebighị ebi, olileanya, Jesus, nne, Nwanyi anyi, ekpere, uwa
Valeria - Ọ bụghị M Na-ata Ahụhụ
Bring na-ebutere ya onwe gị.
agafe, ezigbo ọrụ, arịrịọ, obiọma, ebere, ndidi
Valeria Copponi - Were Ndụ Kpọrọ
I nweghizi ike ichota oge maka Jisos.
Valeria Copponi - Ochebe Gi esiteghi na Chineke
Ekwela ka oge jiri akụkọ na - adịghị mma wezuga onwe gị.
Valeria Copponi - Abịawo m ịkasi gị obi
Anọnyeere m gị, ahụrụ m gị n'anya ma agaghị ahapụ ọbụna nwa na-enupụ isi.
Valeria Copponi - Laghachi n'ụlọ
Ọnwụnwa ndị na - abịara gị n’oge a bụ ịdọ aka na ntị na, n’onwe gị, ihe ga-agbanwe.
kọbọị, mmefu, Rosary
Valeria Copponi - Otu naanị ya bụ Onye Okike
Ee, ụmụ m, “Maranatha.” Kpee ekpere - kpee ekpere ma nwa m nwoke agaghị eme onwe ya ka ọ dị ogologo.
Valeria Copponi - Okwukwe Gị Ga-azọpụta Gị
Inwa n'oge a nọ n'ọgba aghara…
Valeria Copponi - are nọ na Times
Are nọ na “oge”…
Valeria Copponi - Ọnwụ Aghaghị Imeju Egwu
Ọnwụ agaghị egbochi mmụọ a niile, n'ihi na ọ bụ Chineke gị kere gị maka ndụ ebighi ebi.
Valeria Copponi - Yiri Ekike agha gị
POSTED ONFEBRUARY 19, 2020 Mary, nne nke mmeri udo nọnyere gị! Abụ m nne gị, onye si n’eluigwe…
Valeria Copponi - Kwere na Ike nke Ekpere
Ezitere na February 12, 2020, site na Chineke gị: Yourmụ m ndị m hụrụ n'anya, ma ọ bụrụ na ị nọ ebe a, ọ bụ n'ihi na enwere m ...
Mama m na-akwa ákwá n'ihi gị
Otutu ihe iriba ama nke M’zigara gi, ma ejighi onyinye ma obu ihe ojoo choro otutu ka m n’aghota.
Valeria Copponi - Jiri Ugboagha m
Ezitere ya na Jenụwarị 29, 2020, site naMary, Nwanyị Ga-emeri: dearmụ m hụrụ n'anya, ewetara m unu ngọzi nke ...
Valeria Copponi - Naanị Ya Ga-enye Gị Ike
Ezitere na Jenụwarị 22, 2020, site na Jizọs, Onye Bụ nwa m nwanyị, dee: Abụ m Onye ahụ ga-alaghachi n'etiti ...
Valeria Copponi - Ọ Chọrọ Hegwọ Ogbugbu Anyị
Ezitere ya na Jenụwarị 15, 2020, site n'aka Jizọs nke na-eme ebere Ọ bụ m, ụmụ m, Jizọs nke obi ebere. I nwere ndi di otua ...
Valeria Copponi - Atụrụ Na-enweghị Onye Ọzụzụ Atụrụ
Ezitere ya na Jenụwarị 8, 2020, site na Mary, nke Ọkpara ahụ zipụrụ: Mymụ m ndị m hụrụ n'anya, taa agbanweela cenacle m ...
Valeria Copponi - E nyefere Obi Chineke nke Jizọs
Ezitere ya na Jenụwarị 2, 2020, site na Nne Gị nke Eluigwe: Mymụ m hụrụ n'anya dị otú a, nyefere ezinụlọ gị na obi nke Chineke ...
← NKEBI NKE 1: Fr. Michel Rodrigue:…
Gini mere Luz de Maria de Bonilla? →